Ohsama Japanese Hot Pot | MyLann – Online Restaurants Directory and Food Reviews in Myanmar
Ohsama Japanese Hot Pot
Food :5Decoration :5Service : 5
Opening Time - 4:00pm to 11:00pm (Open Now)
Phone - 01 555539
- Hot Pot
- BBQ/Grilled Food
No.28(B), Pho Sein Road, Natmauk Quarter, Tarmwe, Tamwe
အမှတ် ၂၈/ဘီ၊ ဖိုးစိန်လမ်း၊ နတ်မောက်ရပ်ကွက်၊ တာမွေ
Mon 4:00pm to 11:00pm
Tue 4:00pm to 11:00pm
Wed 4:00pm to 11:00pm
Thu 4:00pm to 11:00pm
Fri 4:00pm to 11:00pm
Sat 4:00pm to 11:00pm
Sun 4:00pm to 11:00pm
Price Range: 1000 to 5000
Activities on Ohsama Japanese Hot Pot
Htoo Htoo Aung uploadedaphoto at Ohsama Japanese Hot Pot3years ago
naywun like Ohsama Japanese Hot Pot4years ago
May Kyaw like Ohsama Japanese Hot Pot4years ago
mmfoodie like Ohsama Japanese Hot Pot4years ago
Pop Corn reviewed Ohsama Japanese Hot Pot4years ago
Ohsama! ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ အချိုမှုန့်ယဉ်ကျေးမှုမှ ခွဲထွက်ကာ ကျန်းမာစေရန် အစစအရာရာ ဂရုစိုက်ထားသောဆိုင်.. ကျွန်မအကြိုက်ဆုံး hotpotဆိုင်.. သမရိုးကျ ကြက်ပြုတ်ရည်၊ ဝက်ပြုတ်ရည်မဟုတ်ဘဲ ပင်လယ်ရေညှိကနေ ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ ဟော့ပေါ့အရည်နဲ့ လတ်ဆတ်တဲ့အသီးအရွက်၊ ပြီးတော့ အရသာကောင်းလွန်းတဲ့ အသားငါး တွေကို ဒီဆိုင်မှာ သုံးဆောင်ရမယ်.. အိမ်အိုကြီးထဲက decorarionတွေကလည်း ငေးမောချင်စရာ.. ဘယ်ဆိုင်မှာမှ မတွေ့ရသေးတဲ့ ကျန်းမာရေးအတွက် အာမခံချက်အပြည့်ရှိတဲ့ "ဟော့ပေါ့အိုး"ကို သုံးပေးတယ်.. အချဉ်ကျပြန်တော့လည်း မယုံနိုင်စရာ အရောအစပ်နဲ့ တကယ်ထူးခြားတဲ့ အရသာကိုပေးပြန်ရော.. ဈေးနှုန်းလား? တခြားဆိုင်တွေနဲ့ တန်းတူပဲ.. ဒါပေမဲ့ ကိုယ်စားရတာနဲ့ယှဉ်ကြည့်ရင် ပေးရတာတန်တယ်.. ဘာမှမပြစ်ပြောစရာမရှိတဲ့ဆိုင်ပါပဲ.. အော်! ဒါနဲ့ ဒီဆိုင်လေးမှာ ဂျပန်အကင်လည်း သုံးဆောင်နိုင်ပါတယ်..
Pop Corn uploadedaphoto at Ohsama Japanese Hot Pot4years ago
Kyi Khaing is eating at Ohsama Japanese Hot Pot4years ago
Writeareview for Ohsama Japanese Hot Pot
Report for Ohsama Japanese Hot Pot
Reserve table at Ohsama Japanese Hot Pot